Awe shucks. Kwaive kumhanya kwakanaka hazvo. Ndatenda nekutambira chipo, Doug!
Zvakanaka ichi chishamiso chikuru kwandiri kubva ndanga ndiri kumba ndichirwara zuva rose! Ndingati izvi zvinokurudzira kuverenga bhurogi rako kazhinji, asi ini ndakatoverenga zvakawandisa zvese post. Ndatenda nekuita makwikwi makuru uye ndinovimba kuti iwe nevatsigiri vako munofarawo.
Rudzi rwechinhu urwu runondibatsira kururamisa nguva yangu yekuverenga blog kumukadzi wangu 🙂
Makorokoto Noah! Ndangokutumirai zvinongedzo kuitira mamwe mibairo.
Aive makwikwi anonakidza - ndinotarisira kumakwikwi ako anotevera Doug 😉
Nov 30, 2007 na4:59 AM
Lucky, munhu ane rombo rakanaka! Iwe *unofanirwa* kumhanyisa makwikwi pablog rako, Noah, uye wopa kunyange iPod. 😉
Vamwe vakunda vachaziviswa riini?
Nov 30, 2007 na9:32 AM
Zvose zvakaenda kumuwani wemubairo mukuru! Makwikwi anotevera ndichawana mibairo yekutanga, yechipiri, yechitatu… (Asi zvakafadza Noa!)
Nov 30, 2007 na9:42 AM
Ooh zvakanaka! Ndakatadza kunzwisisa ipapo.
Ndinovimba kuti pamakwikwi ako anotevera, uchaita kuti zvive nyore kuti vanhu vapindewo. Kuve nevatsigiri gumi vekunyora nezvavo hakukurudzire. Hongu isu tese tinoda mamwe mapindiro, asi kune zvinhu zvinogona kunyanyoshanda kwauri zvakare, sekupa iwe zvigunwe kumusoro paSU, kunyorera kufeed yako, kukufarira iwe paTechnorati, nezvimwe…
Maonero angu asi. 🙂
Good post. Iwe unotaura mamwe mapoinzi makuru ayo vanhu vazhinji vasinganzwisise zvizere.
“Ndine urombo nekunonoka kumhanya pane izvi! Isu takatumira runyoro rwezvinyorwa kuAde nekupinda kwega kwega kuve nenhamba isina kurongeka yakabatana (uchishandisa iyo RAND basa muExcel uyezve kuronga iyo column). Takazoita kuti Hannes asarudze nhamba isina kurongeka mukati me108 yakanyorwa kuti Hannes asazive kuti ndiani achakunda. Akahwina mupiro we$1,000 aive Noa pa wpstar.com!
Ndinofarira matsananguriro awaita. Kubatsira kwazvo. Ndatenda.